Olan’ny famatsiana rano :: Nametrahana sinibe koa ny faritra hafa manodidina an’Antananarivo • AoRaha
Olan’ny famatsiana rano Nametrahana sinibe koa ny faritra hafa manodidina an’Antananarivo
Isan’ireo faritra manana olana amin’ny fahazoana rano fisotro madio avy amin’ny orinasa Jirama ny faritra Avaratra, Avaratra Andrefana ary Atsimon’Antananarivo. Toerana efapolo amin’ireo faritra telo ireo no nametrahana siniben-drano, omaly, ho famahana ny olan’ny famatsiana rano. Hahazaka rano 10 000 litatra avy ireo sinibe ireo.
« Tsy ho voafetra ny fatra azo alain’ny mponina amin’io siniben-drano io. Hanomboka tsy ho ela kosa ny fanatanterahana an’ireo tetikasa famatsiana rano fisotro madio amin’ireo toerana ireo, izay hovitaina amin’ny volana septambra ihany », hoy Andriamanga Vonjy, minisitry ny Angovo, ny Rano ary ny Akoran’afo.
Manome tanana ny minisitera tamin’ity vahaolana vonjimaika amin’ny faritra maro ity ny Sampan’ny firenena mikambana misahana ny ankizy (Unicef). Namatsy ara-bola ahafahana mitatitra ny rano ry zareo.
Hifarana tsy ho ela kosa ny asa amin’ilay toby famokaran-drano etsy Amoronankona. Hapetraka ireo fantsona hitarika ny rano hatreny Ambohimahitsy sy ireo andrin-jiro hitondra herinaratra hampihodina ny milina mpampiakatra rano. Andrasana ilay paompy lehibe nohafarana avy any ivelany. Amin’ny 10 septambra no hamokatra rano voalohany ity tobim-pamokaran-drano vaovao ho an’ny faritra Atsinanan’Antananarivo io.
Fiparitahana ny valanaretina Mihatsara ny toe-pahasalaman’ ireo mararin’ny “coronavirus”
Fanadinam-panjakana CEPE :: Mivoaka tsikelikely ny valim-panadinana any amin’ny faritra
Ady amin’ny kolikoly :: Mitohy ny fanenjehana ireo mpiasam-panjakana tsy manara-dalàna